Diaphragm Wall Equipment Factory | China Diaphragm Wall Equipment Manufacturer, mpamatsy
Fitaovana rindrina diaphragm TG60
Ny TG60 an'ny diaphragm ambanin'ny tany ambanin'ny tany dia azo ampiasaina betsaka amin'ny fananganana fanohanan'ny lavaka ifotony, fitaterana an-dalamby, fisakanana ny fidirana an-dranomasina, dock cofferdam, habakabaka ambanin'ny fananganana fotodrafitrasa an-tanàn-dehibe, sns.
Fitaovana rindrin'ny diaphragma TG50
Ny rindrin'ny diaphragm TG50 dia singa miorina ambanin'ny tany izay ampiasaina amin'ny rafitra fitehirizana sy rindrina fototra maharitra.
Ny andian-tsarin'ny tarika diaphragm hydraulic series an'ny TG dia mety amin'ny fivezivezena, fanakanana ny tohodrano, fanampiana amin'ny fihadiana, cofferdam dock ary singa fototra, ary mety ihany koa amin'ny fananganana pilotra toradroa. Iray amin'ireo milina fananganana mahomby sy be mpampiasa indrindra eny an-tsena izy io.
Fitaovana rindrin'ny Diaphragma TG70
SINOVO International dia mpanondrana milina fanamboarana sinoa matanjaka.Koa hatramin'ny niorenan'ny orinasanay, dia manohy mampiditra orinasa lehibe momba ny milina fananganana sinoa ambony izahay sy ny vokatr'izy ireo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy ny mpanjifa iraisam-pirenena ihany no mampahafantatra sy mankasitraka ny vokatray, fa mampiorina tsikelikely ny finamanana amin'ireo mpanjifan'ny milina fanoritana manerantany.